Kedu ihe ọrụ ntụgharị asụsụ na-eme?
Na isi, ọrụ ntụgharị asụsụ na-atụgharị ederede edere site n'otu asụsụ ka ọ bụrụ ederede ederede n'asụsụ ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnweta akwụkwọ ozi edere n'asụsụ Spanish, ị nwere ike ịtụgharị ya n'asụsụ Bekee ma ọ bụ asụsụ ọ bụla ị na-asụ.
Ebe ị nwere ike iji ọrụ ntụgharị asụsụ maka ozi nkeonwe, a na-ejikarị ya maka mkpa azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na China nwere ike ịnwe broshuọ, akwụkwọ, webụsaịtị, akara, ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka a sụgharịrị n'asụsụ Mandarin na Cantonese. Ụfọdụ ụlọ ọrụ na-asụgharị ihe ha n'ọtụtụ asụsụ, dabere na ebe ha na-ere ngwaahịa ma ọ bụ guzobe ụlọ ahịa.
Ọrụ ntụgharị asụsụ na-enye ntụgharị asụsụ ndị a, n'ezie, mana ha na-emekwa ọtụtụ ihe. Ha na-abụkarị ọkachamara na omenala na ụlọ ọrụ ndị a kapịrị ọnụ. Nke a pụtara na ndị nsụgharị ọkachamara na-enyere aka hụ na asụsụ ahụ ziri ezi yana izi ezi na ozi ahụ.
Ndị nsụgharị anyị na Asụsụ 411 maara ihe karịrị asụsụ 160 na omenala ndị dị n'azụ ha. N'agbanyeghị ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ozi gị, anyị na-ekwe nkwa ịdị mma na izi ezi. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịhụ ka ọrụ ntụgharị asụsụ nwere ike isi nyere aka melite azụmahịa gị na mmekọrịta obodo, nweta site na email, ekwentị ma ọ bụ nkata. Anyị nwere obi ụtọ ibido!